> Resource > DVD > Sida loo Guba kasta Video inay DVDs on OS X Mavericks
DVD gubi Your ee aan shaqada ku Mavericks? Tan iyo X OS ka Mavericks waxaa kaliya la sii daayay, gubidda badan DVD aan la casriyeeyay si ay u taageeraan nidaamka cusub weli. Sidaas, haddii aanad isticmaalin DVD gubi asalka ay gubaan DVD on Mavericks, aad leedahay si aad u leexdo xagga gubi kale DVD in ka shaqaynayso Mavericks. Wondershare Video Converter Ultimate for Mac noqon kartaa gubi DVD ugu wanaagsan ee Mavericks.
Waxaa la casriyeeyay si buuxda u taageeraan Mavericks la joogo in nidaamka cusub ee la sii daayay. Oo doonaa in sidoo kale la casriyeeyay waqtigii si ay u taageeraan qoraalkii mustaqbalka. Sidaas, ha ka welwelin ma shaqeynaayo maanta qaar ka mid ah. Waxa kale oo muhiim ah, gubi DVD, waayo, Mavericks waa ay awoodaan in ay ha idinka dhowaad file video kasta gubi ah DVD disk xirfadeed oo keliya la qasabno yar. Hel tilmaan faahfaahsan hoos ku qoran.
1 dejinta aad video files in this gubi DVD weyn u Mavericks
Riix ah "Guba" tab ugu sareysa, ka dibna ku dhufatey "File" doorasho ku bar weyn ee menu in ay doortaan "Media Load Files". Markaas, daaqad arbushin doonaa, waxaad keentay in la helo kuwaas videos aad rabto in aad ku gubi. Next, kaliya labo gool-riix files bartilmaameedka in ay dajiyaan in this Mac app ee Murayaad. Isla markiiba, aad arki doonaa iyaga tusay sida thumbnails. Ogow in ay tani barnaamijka Mac taageertaa howlgal jiitaa-n-dhibic.
Fiiro gaar ah: bar cagaarka idin ​​tusiyo baaxadda dhan video files laga keeno.
2 Dooro template DVD Menu ah ama wax ka bedel videos
Qeybta hoose ee Murayaad this app ee, waxaa jira liis ay ku jiraan qaar ka mid ah boggan arrimo DVD menu classic ah. Hadda, waxaad u baahan tahay in ay doortaan mid ka mid ah arrimo DVD menu jecel. Haddii aad rabto in aad wax ka bedel videos hor DVD gubashada, aad si toos ah u riixi kartaa batoonka Edit ee bar video shayga si ay u helaan qalabka tafatirka video aad rabto. Ugu dambeyntii, kaliya riix "Kulanka Xiisaha Leh" button inay ku eegaan saamaynta final.
3 bilow DVD gubanaya on Mavericks
On the "Gubasho" interface ka mid ah gubi DVD u Mavericks , kaliya aad ku dhufatey "Guba" badhanka si ay u bilaabaan DVD gubanaya on Mavericks. Software DVD gubashadii waxa uu leeyahay awood u leh inay ku dhameystaan ​​hawlo inta ka gubanaya daqiiqadii ah. Ka dib markii DVD gubashada, waxaad ka heli kartaa DVD disc ah Writen.
Top 10 Film DVDs Got Search Attention ugu sarreeya ee 2014